Waxaa Qoray: Saed Mohamed ahmad Taariikh: 29-04-12 5:22 PM | gaani89
Abriil 29, 2012
Waxaa Qoray: Saed Mohamed ahmad Taariikh: 29-04-12 5:22 PM
Chelsea ayaa soo gashay kaalinta shanaad waxaana ay hal dhibic u jiraan kaalinta afaraad ka dib markii ay lix gool iyo gool ku xasuuqeen kooxda QPR oo marti ku aheyd garoonka Stamford Bridge. Iyadoo Fernando Torres uu dhaliyay seddexleey, islamarkaana uu soo bandhigay in kalsoonidiisii ay soo laabatay.
Ciyaarta ayaa ku bilaabatay iyadoo aysan wax gacan qaad ah dhexmarin ciyaaryahanada labada kooxood sida madaxda Premier League ay soo jeediyeen, waxaana Chelsea ay ku bilaabatay si dardar leh ka dib markii ciyaarta oo 40 ilbiriqsi socota uu gool qatar ah shabaqa ku hubsaday Daniel Sturridge.
Waxaana Chelsea hogaanka u sii dheereeyay kabtankooda John Terry oo kubad madax aheyd shabaqa dhexdhigay, ciyaaryahan Fernando Torres ayaa u seddexeeyay ka dib markii uu baas qatar ah ka helay Kalou, isla isaga ayuuna ahaa ciyaaryahankii dhaliyay goolka afaraad markii uu ka faa’ideystay qalad ay sameeyeen daafaca iyo goolhayaha QPR. 25 daqiiqo markii ay ciyaarta socotay waxa ay aheyd 4-0.
← gawar china ah oo conok somali ah kuwaa latay 2012-29-4 7:00:am
Waxaa Qoray: Saed Mohamed ahmad Taariikh: 29-04-12 5:22 PM →